Itoobiya: qalalaaso maalintii 3aad ka soconaya Gobolka Amxaarada – Kasmo Newspaper
Updated - February 22, 2018 2:21 pm GMT
London (Kasmo), Wararka ka imanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya dibadbaxyo ka soconaya maalintii 3aad oo xiriir ah magaalada Gondar ee Gobolka Amxaarada.
Dad goobta jooga ayaa xaqiijinaya in, cabashooyinka oo looga soo horjeedo xukunkii degdegga ahaa ee Xukuumaddu ku dhawaaqday 18kii Febraayo, curyaamiyeen noloshii magaaladaas.
Waxaa xiran dhammaan goobihii ganacsiga, waxaa joogsaday gaadiidkii dadweynaha, waxaa sidoo kale xiran xafiisyadii Dawladda, ciidammo ayaana wareegaya dariiqyada cidlada ah. Gobollada Amxara iyo Oromiya waa meelaha ugu weyn ee ay ka soconayaan cabashooyinka lidka Xukuumadda oo soo bilowday bishii Nofembar 2015kii.
Ma ahan markii u horreysay oo xukuumaddu soo saarto xukun degdeg ah, iyada oo intii u dhexaysay Nofembar 2016 ilaa Agosto 2017 la joojiyay nooc kasta oo dibadbaxyo ah, xilligaas oo Xukuumadda lagu eedeeyay gaboodfalloo xuquuqda ah.
Warbixintii u dambaysay ee Amnesty International ayaa lagu muujiyay in xoogagga amnigu adeegsadeen awood xaddhaaf ah, iyaga oo ilaa dhammaadkii 2016dii dilay dad gaaraya 800, qaar kalana dhaawacay.
Xukuumadda ayaa 3dii Jenaayo 2018 ku dhawaaqday in maxaabiista siyaasadda laga siideyn doono xabsiyada, si loo raadiyo dib u heshiisiin qaran, laakiin dibadbaxyada ayaa halkoodii ka sii socday. Kuwaas oo 15kii Febraayo ku khasbay Ra’iisal Wasaare Hailemaryam Desalegn in uu xilkii ka dago, si dhabbaha loogu furo isbeddello dimuqraadi ah.
Xaylemaryam oo xilka qabtay 2012kii wuxuu hoggaamiyaa xibiga SEPDM (Southern Ethiopia People’s Democratic Movement) oo ka mid ah Isbahaysiga talada haya, 3da xisbi ee kale waa ANDM (Amhara National Democratic Movement), OPDM (Oromo People’s Democratic Organization) iyo TPLF (Tigrayan People’s Liberation Front).
Istiqaaladda Desalegn waxay dood kulul oo ku saabsan ciddii beddeli lahayd ka dhex dhalisay Isbahaysiga talada haya EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front) oo doorashooyin cusub gali lahaa sannadka 2020ka.